ဆေးရုံပြင်ဆင်စရိတ်များ ကျပ်ငွေသန်းချီ ချပေးထား၊ ပြင်ဆင်စရိတ် မတောင်းကြသဖြင့် ပေးလို့မရဖြ? - Yangon Media Group
ဆေးရုံ ပြင်ဆင်စရိတ်များ ကျပ်ငွေသန်းချီ ချပေးထားပြီး ပြင်ဆင်စရိတ်မ တောင်းသဖြင့် ပေးလို့မရဖြစ်နေကာ တောင်းပါကပေးမည်ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးက ပြောသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက် ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ပြည့်ဖြိုးက ရွှေလောင်းတိုက်နယ် ဆေးရုံ၏ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ သန့်စင်ခန်းများ၊ ဆေးရုံဝင်းအတွင်း ရေ ဝပ်သောကြောင့်အနံ့ဆိုးများမှာ ဆေးရုံအင်္ဂါရပ်နှင့်မညီသည့်အတွက် မြေဖို့ရန်လိုအပ်ခြင်းစသည်တို့ကို မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ကိုသိလို ကြောင်း မေးမြန်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ယင်းသို့ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆေးရုံများကို ပြင်ဆင်စရိတ်ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၄၄၄၇ သန်းချထားပေးကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆိုသည်။ ”ဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုရင် အမှန်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးနဲ့အထူးသဖြင့် ဆေးရုံမှာလုပ်တဲ့ တိုက်နယ်ဆရာဝန်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ တိုက်နယ်ဆေးရုံဆရာဝန်က တောင်းရ မယ့်တာဝန်သည် သူ့တာဝန်။ ပေးရမယ့်တာဝန်သည် ကျွန်တော်တို့တာဝန်။ သူကမတောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကပေးလို့မရဘူးဖြစ် နေတယ်။ တောင်းရင်ပေးပါမယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝါးခယ်မမြို့နယ် ရွှေလောင်းတိုက် နယ်ဆေးရုံတွင် တိုက်နယ်ဆေးရုံ အင်္ဂါရပ်နှင့်မညီညွတ်ဘဲ လူနာများအတွက်အဆင်မပြေသဖြင့် မြို့နယ်ဆေးရုံသို့အများစုသွား ရောက်နေကြောင်း ဒေါက်တာ ပြည့်ဖြိုးကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ၊မရှိ မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ဖြင့် ဆေးရုံများအကြီးစားပြင်ဆင်စရိတ်၊ အသေးစားပြင်ဆင်စရိတ်ဟုထားရှိကာ ခုတင် ၅ဝဝ ဆံ့မှ ၁၆ ခုတင်ဆံ့ဆေးရုံများအထိ အတိုင်းအတာအလိုက်ချမှတ်ပေးထားကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ခုတင် ၅ဝဝ ဆံ့ဆေးရုံအတွက် ကျပ်သိန်း ၆ဝဝ၊ ကျန်ခုတင် ၃ဝဝ ဆံ့ဆေးရုံကိုကျပ်သိန်း ၅ဝဝ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံကို ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ စသဖြင့် ခွဲခြားချပေးထားကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ပြောကြားချက်အရသိရသည်။
မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ ရန်ကုန်မြို့သစ်တွင် မြေချပါမစ် ထုတ်
မန္တလေးသား လူငယ်နှစ်ဦး မန္တလေးမြို့တွင် ပထမဆုံး Paramotor Pilot စီးနင်း ပျံသန်းပြသ
ပြင်သစ်ရဟူဒီစာသင်ကျောင်းသို့ အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ကျန်တရားခံတစ်ဦးကိုဖမ်း?
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ မြဝတီခရီးစဉ်၌ ‘MoU အလုပ်သမားများအရေး ကယ်တင်ပေးပါ’ ဆိုသည့် ?
အများပိုင်လမ်းများကို ကားဂိုဒေါင်ကဲ့သို့ အသုံးပြုနေခြင်းမှာ မဖြစ်သင့်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ဆို
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ရေရှားပါးမှု ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းအစိုးရ ရန်ပုံငွေကျပ် သန်??
ကန့်ကွက်သူ များပြောနေသကဲ့သို့ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွင် ကလေးမွေးစားရုံဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရမည် ဆိုသည့်အချက်မှာ မဟုတ်မှန်ဟု သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရ ဆို